भद्र, सालिन एवं विनम्र स्वभावका डा. मनमोहन सिंहले छिमेकी राष्ट्र भारतमा दुई कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गरे । सन् २००४ देखि २०१४ सम्म उनको नेतृत्वमा सरकार चल्यो । डा. सिंहले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले पनि उनले ‘छायाँ प्रधानमन्त्री’ को बिल्लालाई भने आफ्नो कार्यकालभरि हटाउन सकेनन् । विदितै छ, कांग्रेस (आई) का अध्यक्ष सोनिया गान्धी र युवा–नेता राहुल गान्धीकै बोलवाला चल्यो, सरकारको पूरै अवधिभर । डा. सिंहलाई ‘रवरट्याम्प प्रधानमन्त्री’ को रुपमा मात्र धेरैले चिन्हित गरे ।
यद्यपि, कांग्रेस (आई) नेतृत्वको सरकारको कार्यकालभरि एउटा पात्र भने सर्वाधिक चर्चामा रहे–रोवर्ट वाड्रा । उनी थिए, सोनियाका एक मात्र प्रिय ज्वाइँ । व्यापारिक पृष्ठभूमिका वाड्राले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहुन्जेलसम्म सत्ता–सामिप्यको फाइदा उठाएर आफ्नो व्यापारिक दायरालाई निकै फराकिलो तुल्याए । कांग्रेस सत्तामा आउनुअघि सामान्य व्यापारिक हैसियत भएका उनले त्यसपछिका दिनमा भने चमत्कारिक रुपले व्यापारिक फैलावट र विस्तार गर्न सके । सोनिया–राहुलको अथाह निगाह, सहयोग र समर्थनमा उनले ठूला–ठूला व्यापारिक सम्झौता र साझेदारीसमेत गर्न भ्याए । नातावादको आड–भरोसामा चम्किएका सफल भारतीय व्यापारीहरूमध्ये वाड्राको गणना पहिलो लहरमै हुन्छ, अहिले ।
दुई पटकसम्म भारतीय सत्ताको बागडोर सम्हाल्न सफल कांग्रेस (आई) ले पछिल्लो समय नराम्ररी पराजयको स्वाद चाख्नुमा यस्तै नातावाद, कृपावादको अथाह मोहले भूमिका खेलेको छैन होला भन्न सकिँदैन । कांग्रेस (आई) लाई वंशवादको कालो दाग त लागेको थियो नै, त्यसमा सत्तामा रहँदा नातावाद, कृपावादलाई प्रश्रय दिएका कारण पनि भारतीय जनता पार्टीले त्यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन पाए र कांग्रेस (आई) को पतनको प्रक्रिया सुरु भयो । भाजपाले अपार सफलता पाउनुमा कांग्रेस (आई) ले सत्तामा रहँदा गरेका गम्भीर गल्ती र कमजोरीहरू नै मुख्य कारक बन्न पुगे ।
नेपाली राजनीतिक वृत्त पनि नातावाद, कृपावाद, चाकडीवाद, कमिसनवादबाट ग्रस्त रहँदै आएको छ । सत्ता र शक्तिको लगाम समातेकाहरूले यस्ता अनेक वादहरूलाई सदैव शिरोधार्य गर्दै आएका छन् । कुनै योग्य, क्षमतावान् र नेतृत्व–कौशल भएका एकाध व्यक्तिहरूले कहीं कतै अवसर पाएका होलान् । तर, यसलाई अपवादको पंक्तिमा राख्नुपर्ने हुन्छ । जेजतिले अवसर हात पारेका छन्, बहुसंख्यकले नातावाद, कृपावाद, चाकडीवाद र कमिसनवादकै आडमा पाएका छन् । अझ, राजनीतिक नियुक्तिमा त यस्ता वादलाई पछ्याउने बाहेककाले आँखा लगाउनै पर्दैन । राजनीतिक नियुक्ति यिनै वादहरूलाई ‘एक मात्र असल र व्यावहारिक वाद’ ठान्नेहरूकै कब्जामा पर्दै आएको छ ।
हामीकहाँ अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति सदैवजसो नै विवादमा पर्दै आएको छ ।
अधिकांश नियुक्ति परिवारवादको परिधिभन्दा टाढा नहुने भएका कारण पनि यस्तो विवाद उत्पन्न हुँदै आएकोमा विवाद देखिँदैन । सत्तामा पुगेपछि उच्च, प्रभावशाली एवं राम्रो सेवा–सुविधाले लैस पदहरूमा आफ्नै परिवार वा नाताभित्रका मानिसहरूलाई पुर्‍याउने ध्याउन्ना पहिलादेखि नै प्रारम्भ हुँदै आएको हो । मूलतः हामीकहाँ यस्तो प्रवृत्तिको विकास २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि घनीभूत रुपमा देखा पर्न थालेको हो । २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि त यो प्रवृत्ति कुनै परजीवि वनस्पतिझैँ झ्याँगिन थाल्यो र त्यसले प्रजातन्त्ररुपी वृक्षलाई पूरै कुरुप र सौन्दर्यहीन तुल्याउन नकारात्मक भूमिका खेल्यो ।
सबैमा एउटा आशा पलाएको थियो, गणतन्त्र आएपछि यस्तो प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लाग्ला । तर, भ्रम मात्रै रहेछ । चाहे बहुदलीय व्यवस्था होस् वा गणतन्त्र होस्, यस्तो प्रवृत्तिले बिदा पाउनु निकै गाह्रो र मुस्किल कार्य रहेछ । परिवारवादका हाँगाबिगाहरू मौलाउने कार्य गणतन्त्रमा पनि उत्तिकै भइरहेको छ र त्यसले गणतन्त्रको सुन्दर अनुहारमा दाग पोत्ने कार्य मात्रै गरिरहेको छ ।
नियुक्ति प्रकरणमा परिवारवादको घेरा नाघ्ने प्रयत्न कसै–कसैले गरे पनि चाकडीवाद लम्पसार परेर हाजिर भइहाल्दो रहेछ । आम मानिसको स्वभाव नै सत्ताको लगाम समातेकाहरूप्रति अतिशय चाकडीमा लिप्त हुने नै हुँदो रहेछ । आखिर, सत्ताको आकर्षक भनेकै त्यही होला । आफ्नो वरिपरि चौबीसै घन्टा गणेशझैं घुम्नेहरूलाई बहुरुपी महादेव–पार्वतीहरूमा दयाभाव र सदाशयता पलाउनु स्वाभाविकै हो । बिचरा, कुमारहरू आजीवन ‘कुमार’ नै रहन्छन् । आज पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अधिकांश ‘कुमार’ हरू ‘गणेश’ हरूसामु लाचार छन् र दक्ष, क्षमतावान् भए पनि महादेवहरूका दयादृष्टिबाट ओझेलमा परेका छन् ।
जसले परिवारवाद, चाकडीवादको घेराभन्दा माथि उठ्ने महानता देखाउँछन्, तिनीहरूले अपनाउने बाटो रहेछ– कमिसनवाद । वादहरूमा यो निकै उच्च, महान् र सबै ऋतुहरूमा मौलाउने वाद रहेछ । यो वादलाई पूर्ववर्ती दिनहरूमा सत्ताको लगाम खिच्नेहरूले नअपनाएका होइनन् । यही वादको पुच्छर समातेर कतिपयले आफ्नो वर्ग नै परिवर्तन गरे भने कतिपय भने यही वादको ‘बात’ लागेर धूलो चाट्ने तहसम्म पनि पुगे । यो वाद अँगाल्नेहरूमा कोही आफ्नो चातुर्‍यताका कारण राजनीतिको रंगमञ्चमा आजसम्मै अभिनयरत छन् भने कोही चाहिँ दर्शकहरूसामु केही सामान्य भूमिका र संवाद छाडेर अलप भइसकेका छन् ।
परिवारवाद, नातावाद, कृपावाद, कमिसनवादका गन्थनलाई केही क्षण रोकेर तक्षक सर्पको कथा भन्न मन लाग्यो ।
तक्षक सर्पको कथा
श्रीमद् भागवतमा एउटा कथा छ– तक्षक सर्पको । कथा निकै चोटिलो छ ।
एक पटक तक्षक सर्पले डस्दा राजा परीक्षितको मृत्यु हुन्छ । राजा जनमेजयले आफ्ना पिता परीक्षितको मृत्युको बदला तक्षक सर्पसित लिनका लागि एउटा ठूलो नाग–यज्ञ गराउँछन् । त्यो नाग यज्ञमा कैंयौं सर्पहरू आउँछन् र त्यहीं नै भस्म हुन्छन् । तर, तक्षक सर्प भने त्यो यज्ञमा आउँदैन । बाठाहरूका कुरै बेग्लै ।
नाग यज्ञमा तक्षक सर्प नआएपछि राजा जनमेजय चिन्तित हुन्छन् । राजा जनमेजयले सोध्छन्, ‘अरु सबै सर्पहरू आए तर किन तक्षक सर्पचाहिँ आएन ?’
केही पण्डितहरूले बताउँछन्– ‘तक्षक सर्पलाई कुनै पनि मन्त्रले असर गर्न सक्दैन, किनकि ऊ इन्द्रको सिंहासनमा लपेटिएर बसेको छ ।’
त्यसपछि पण्डितहरूले ‘तक्षकाय स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा’ भनी जप गर्छन् । जप सुरु हुन थालेपछि इन्द्र हड्बडाएर उठ्छन् र तक्षक सर्पलाई भगाइदिन्छन् ।
आज ‘इन्द्र’ को सिंहासनका केही तक्षक सर्पहरू गज्जबले टाँस्सिएर बसेका छन् । कहिलेकाहीं जब केही पण्डितहरूले ‘तक्षकाय स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा’ भनेर जप गर्न थाल्छन्, त्यतिबेला ‘इन्द्र’ ले तक्षक सर्पहरूलाई भगाउन खोज्छन् । तर, जब पण्डितहरू फेरि चुप लाग्छन्, तक्षकहरू इन्द्रकै आशन वरिपरि घुम्छन् र आफ्नो स्वार्थको खेती गर्न तल्लिन भइहाल्छन् ।
(पुनश्चः यो लेखमा मैले कुनै नाग जातिप्रति विद्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिन चाहेको होइन । म मूलतः नागपूजक हुँ । पुर्खाहरूले अपनाउँदै आएका कारण म प्रत्येक वर्षको नागपञ्चमीका दिन दैलोमाथि नागको तस्बिर टाँस्ने गर्छु । यो तक्षकलगायत अरु तमाम नागहरूप्रति मेरो सम्मान र उनीहरूको बक्रदृष्टिमा नपरौं भन्ने चाहना पनि हो । यदि कुनै नागप्रति अवहेलना हुन पुग्यो भने म विनम्रपूर्वक क्षमा चाहन्छु ।)
तर, सर्पहरु कहिल्यै क्षमायोग्य भने हुँदैनन् ।
सुनचांदीको मूल्य स्थिर, हेर्नुस कतिमा हुदैछ कारोबार